अमेरिकाबाट माधव नेपाललाई ओलीको खरो जवाफ, हेर्नुस् भिडियो - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ असोज १३ गते १४:४०
काठमाडौं, १३ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला अमेरिकामा छन् । उनी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुगेका हुन् । तर, ओली अमेरिका रहँदा पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक सक्रियता बढाए ।
उनले संसदमा सरकार विरोधी भाषण मात्रै गरेनन्, स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भेला पनि बोलाए । नेता नेपालको गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाबाटै कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफूलाई व्यक्तिगत केही पनि आवश्यक नपरेको भन्दै नेपाललाई कुण्ठा पोख्ने काम बन्द गर्न सुझाए ।
अमेरिकामा पत्रकारिता गर्दै आएका सूर्य थापासँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘केही मान्छेहरुमा अलिकति कुण्ठा देखिन्छ, त्यो कुण्ठा पोख्नका लागि विभिन्न प्रकारका कुराहरु गरेका छन् । एउटा कृत्रिम परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको छ, जसको खासै अर्थ केही पनि छैन, सचिवालयको निर्णय विल्कुल ठीक छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पत्रकार थापाले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
यो एउटा कृत्रिम परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको छ, जसको खासै अर्थपूर्ण केही पनि छैन । यस बीचमा सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार रोकिएको छ । सुशासनका पक्षमा थुप्रै कदमहरु चालिएका छन् । थुप्रै कानूनहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि बनेका छन् । तीन वर्षभित्र कानून तयार गरिसक्नुपर्ने, तर ६ महिना बाँकी रहँदासम्म कानून तयारीको कुनै कामै भइदिएको छैन । पहिले मेरो नेतृत्वको सरकारले जुन थालेको थियो, त्यो त्यहीँ छोडिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा यी सबै कानूनहरु, मौलिक हकको सम्बन्धमा तयार गर्नुपर्‍यो । नयाँ संविधान अनुसार अरु कानूनहरु निर्माण, संशोधन गर्नुपर्‍यो ।
मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनको सम्बन्धमा गत वर्ष बनेको थियो, त्यसमा बनाउनेहरुले नै अहिले बखेडा निकाल्या छन् । जसले पहिले बनाए, उनीहरु नै विरोधमा उफ्रेका छन् । अहिले एक वर्षपछि आएर यो सरकार तानाशाही भयो भन्दै उफ्रिएका छन् । यो सरकारले अलोकतान्त्रिक कानून बनायो भनेर उफ्रेका छन् । आज विरोधका स्वरहरु आयोजना गर्ने पनि उनीहरु नै हुन् । त्यसलाई उचाल्ने पनि उनीहरु नै हुन् ।
केही मान्छेहरुमा अलिकति कुण्ठा देखिन्छ । त्यो कुण्ठा पोख्नका लागि विभिन्न प्रकारका कुराहरु गरेका छन् । अहिलेको यो सरकारले बजेट बनाउँदा नबनाउँदा वर्षायाम सुरु भइसक्यो । सरकार गठन गर्दा/नगर्दा यसैबीचमा देशभरिका बाटा बनाइसक्न त सम्भव थिएन । तर, यसबीचमा तीन दिनमा एउटाका दरले तुइनहरु विस्थापित भएका छन् । झोलुंगे पुलहरु बनेका छन् । र, बाटाहरु बनेका छन् ।
केही वर्ष लाथ्ग्यो मेलम्चीबाट खानेपानी ल्याउन । त्यो दु्रत गतिमा काम भइरहेको छ र एक डेढ महिनाभित्र हामी काठमाडौंमा ल्याउँदैछौं । काठमाडौंको पानी सप्लाइको, ढलको अवस्था के छ, मैले भनिरहनुपर्दैन । सबै थोत्रा पाइपहरु छन् । त्यहाँ पानी छोड्नेबित्तिकै फेरि एउटा तहल्का हुन्छ । पानी नल्याई भएको छैन । तर, फेरि एउटा तहल्का हुन्छ र फेरि हामीले ती पाइपहरु विस्थापित गर्ने र नयाँ बनाउने काम गर्नुपर्छ र बाटाहरु भत्किन्छन्, फेरि बनाउनुपर्ने हुन्छ । बाटाहरु छन् नै कहाँ काठमाडौंमा भनेजस्तो स्थिति छ । त्यसलाई मैले भनेको छु कि ६ महिनाभित्र म यो सबै व्यवस्थापन गरिसक्छु । र, दुई वर्षभित्र बाटाहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याइसक्छु र काठमाडौं ढलको हिसाबले, पानीको हिसाबले, बिजुलीको हिसाबले, टेलिफोनको हिसाबले, यी सबै हिसाबले व्यवस्थित र राम्रा बाटाहरु भएको शहर दुई वर्षभित्र बनाउँछु ।
यसमा समय त लाग्छ । अहिलेसम्म बनेन । यत्रो वर्ष बनेन । ५ महिनाभित्र खानेपानी ढल आदिको व्यवस्था गरिसक्छु । र, दुई वर्षभित्र राम्रा बाटाहरु बनाई सक्छु भन्दा चाहिँ केही पनि गरेन भनेर उफ्रिनेहरु, भनेजस्तो भएन भनेर उफ्रिनेहरु यो तपाईले भनेजस्तो सामाजिक सञ्जालमा फिँजाइएको एउटा हल्ला हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले भनिहाल्नु भो लामा कामहरु ६ महिनामै त सम्भव छैनन् । त्यसैले एउटा सपना देखाउने, भविष्यको मार्ग देखाउने हो । तर, जनतामा के हुँदोरहेछ भने दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्दा, पप्पु कस्न्स्ट्रक्सन जस्ता स-साना व्यक्ति-व्यक्तिका कुरा जोड्दाखेरि जनताले सिधै तपाईसँग नाम जोड्ने र साना विवादमा यो दुई तिहाईको सरकार किन फस्ने ? जनताको दीर्घकालीन काम गर्ने लाग्ने, साना साना विवादमा फस्ने खालका काम नगर्दा हुन्थेन ?
पार्टी भनेको बजारमा भेला भएका मान्छे होइनन् । कोही माछा किन्न, कोही साग किन्न गएको हुन्छ । कोही बेच्न गएको हुन्छ, कोही अरु नै केही कामलाई गएको हुन्छ । विभिन्न कामले गएका हुन्छन् । विभिन्न उद्देश्यले गएका हुन्छन् । तिनको गन्तव्य पनि एउटै हुँदैन, उद्देश्य पनि एउटै हुँदैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई काम हामीले दिएको होइन ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पुल हाम्रो समयमा बनेका होइनन् । भत्किएका पुल, नबनेका पुल, भाँच्चिएका पुल, कच्ची पुल, जे भएका हाम्रो समयमा होइन । ती पहिले त्यस प्रकारकाले केके लिने दिने भए, पहिलेकाले जानुन् । केके कारणले एउटा पनि राम्रो काम भएन, त्यो पहिलेका सरकारले जान्ने कुरा हो । तर, अहिलेको सरकारले त सम्बन्धमा छानविन गरेको छ । खोजीनिती गरेको छ र छानविनबाट त्रुटीपूर्ण, अपराधपूर्ण देखिएका ठाउँमा कारबाही गर्छ ।
अब जहाँसम्म केही मान्छेहरुको नियुक्ति छ, ती मान्छेहरु अदालत गएर फिर्ता भएर आएका छन् । अदालत गएर सबै फिर्ता भएर आए । कसैले चाहिँ एकजनाले भन्यो, म अदालत गएर सरकारसँग झमेला गरेर जागिर खान्न । त्यसकारणले मात्रै ऊ आएन । अथवा अदालत गइसकेर पनि उसले फिर्ता लियो । हुन त अदालत जानेवित्तिकै म पुनस्थापन भैहाल्छु । तर, मैले यो झै-झगडाको बाटो छाडिदिएँ भन्यो ।
अदालत गएपछि त पुनस्थापना भइहाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटामात्रै मान्छेले सरकारसँग मुद्दा लडेन भनेर उसलाई चाहिँ बाहिर राख्नुपर्ने ? उसलाई क्षमता ठिकै छ, अदालतबाट आउनुपर्ने आएन भने पनि उसलाई अहिले दिँदाखेरि न्यायोचित नै हुन्छ, किनभने भ्रष्टाचार पहिले गरेको छ कि छैन, भ्रष्टाचारको आरोप होला । कतै दोषी प्रमाणित भएको थाहा छैन । भ्रष्टाचार अहिले गर्न दिइँदैन । अहिले कुनै लेनदेनको कारोबार हुँदैन । कुनै कमिसनतन्त्र चल्दैन । यसो भएर अदालत नगएवापत कोही बाहिर बस्नुपर्ने जस्तो कुरा हुँदैन भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यसलाई मानिएको हो ।
तपाई विसं २०१५ साल पछि दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुुहन्छ । जनताले लामो समयदेखि यो चाहेका थिए, बल्ल पाएका छन् । तर, दुई तिहाईको सरकार बनेको सुरुआतमै घेराबन्दीमा परेको जस्तो लाग्छ ? यो घेराबन्दी भित्रबाट छ या कसले गरिराखेको होला ? तपाईलाई के लाग्छ ?
तपाई पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । तपाईले पार्टी र सरकारको रक्षाका लागि कार्यकर्ताहरुलाई अरिंगालजस्तो बन्नुपर्‍यो पनि भन्नुभयो । तर, तपाई अमेरिका आइसकेपछि माधव नेपाल र अन्य नेताहरुले पनि सरकार र पार्टीको कामप्रति निक्कै ठूलो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? तपाईले रक्षा गर्न भन्नुभएको थियो, उल्टै विरोध भैरहेको छ त ?
अर्को तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भनें, अहिले म संसदीय दलको नेता ०७० को चुनावपछि छानिएपछि संविधान बन्ने बाटोमा गयो । सबै पक्षहरुलाई मिलाएर संविधान जारी गरियो । महाधिवेशन भयो, म अध्यक्ष भएँ । अध्यक्ष भएपछि, संविधान जारी भएपछि सरकार बन्यो । त्यसले हाम्रो छिमेक सम्बन्ध कस्तो हुने, आदि कुराहरुलाई एउटा आकार दियो । त्यसपछि हामी एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गर्‍यौं । हामीविरुद्ध अवश्य नै घेराबन्दीजस्तो स्थिति भएको हो, तर हामीले त्यसलाई तोडेर संयुक्तरुपमा चुनाव लड्यौं । पार्टी एकता गर्‍यौं । राम्रो बहुमत हामीसँग छ । सरकारमा दुई तिहाई छ । मैले तीन चौथाई भन्दा बढी मतको समर्थन प्राप्त गरें । नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पास भो ।
यस स्थितिका साथ अगाडि जाँदैछ । र, अहिले साउन र भदौमा बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको हो । अब साउन र भदौमा बजेट निकासा हुन पाएको छैन । पानी परेको छ, पहिरो गएको छ, बाटो बन्न पाएको छैन । त्यसैबेला भारतसँगका थुप्रै सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्नेदेखि लिएर चीनसँग पारवहन यातायात सन्धीको प्रोटोकल तयार हुनेदेखि लिएर यी सप्पै काम भएका छन् । र, नयाँ उत्साहका साथ देश अगाडि बढिराखेको छ । अब यसमा म नहुनेबित्तिकै अब कसैलाई अलिकति शुन्यता भो, छटपटी भो, लौन कसरी बर्बाद हुन लाग्यो भन्ने परेको भने।
यो पहिल्यैदेखि थियो । एक नम्बर प्रदेशमा भीम आचार्य पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो । दुईमा सत्यनारायण मण्डल पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो । तीनमा अष्टलक्षमी शाक्य पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो । चारमा यसपल्ट परिवर्तन भएको हो । पाँचमा महासचिव भएको हुनाले परिवर्तन भएको हो । ६ मा जनार्दनजी हुनुभो क्यार । ७ मा भीम रावलै हुनुहुन्थ्यो ।
परराष्ट्र सम्बन्ध त सुधार्नुभयो । तर, आन्तरिक रुपमा तपाईले एकदमै पेल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि यहाँलाई ?
मैले पेल्नुपर्ने किन छ र ? म पार्टी अध्यक्ष भैसक्या छु, म प्रधानमन्त्री भैसकेको छु । मलाई अरु केही चाहिएको छैन । मलाई पैसा कमाउनु छैन । धन कमाउनु छैन । केही गर्नु छैन । यस्तो अवस्थामा मैले कसैलाई पेल्नुपर्ने होइन ।
कोही आफ्ना साना स्वार्थहरु राखेर केही कुराहरु भन्छ, अथवा ल न म तपाईको समर्थक हुँ, मलाई यो चाहियो भनेका भरमा त्यो भएन भन्छ भने वा कसैले आफ्नो नातागोताका निम्ती पीर चिन्ता गर्छ भने ती कुरा त देशले सम्वोधन गरेर साध्य हुँदैन ।